Safe Toys, Organic Teether, Sweetooth Baby Teether - Melikey
Wholesale - Kugadzirisa - OEM & ODM
Isu tine nyanzvi yeR & D timu uye tinopa OEM / ODM sevhisi. Professonal pasilicone indasitiri ye10+ makore
Melikey iChina silicone inotengeswa mucheche mhando yeHuizhou Melikey Silicone Product
Melikey inonyanya kuzivikanwa nesilicone baby dinnerware uye silicone matoyi emwana.
Kusanganisira silicone baby bibs, silicone baby ndiro, silicone baby plates, silicone baby spoon,
silicone teethers uye silicone beads, etc. China mucheche matoyi wholesale supplier.
Iyo kambani yakavambwa muna 2016 uye iri muHuizhou City, Guangdong Province. Pakutanga
, kambani yaingova kashopu kadiki ne1 mutengesi.
Kuvandudzwa kwechikwata chebhizinesi kwakaramba kuchikura, uye chiyero chekambani
yakawedzerwawo . Mushandi wekambani ndiamai vemwana.
Nokuti anoziva kukosha kwehutano nekuchengeteka kwemwana, huzivi hwekutanga hwekambani
inogara ichiti "mhando yechigadzirwa hupenyu".
Iyo kambani yakagadzira hurongwa hwekutarisira hunhu hunoenderana nezvinodiwa
neInternational quality management system. Iyo kambani inoramba ichiburitsa zvigadzirwa zvepakutanga
zvinoenderana nemusika uye zvinodiwa nevatengi, uye inogara ichichengetedza
hutsva uye hunyanzvi hwezvigadzirwa.
Tine nyanzvi yeR & D timu. Tinogona kugamuchira OEM uye OD M.
Kudada Kuve China Wepamusoro-notch Silicone Zvigadzirwa Mugadziri & Silicone Zvigadzirwa Wholesale Mutengesi
Melikey Silicone izita rinoshamisa pakati pezvakanakisa silicone zvigadzirwa muChina. Tine anopfuura makore gumi nemaviri ruzivo mufekitori yekugadzira silicone chigadzirwa mold. Isu tinobatsira makambani makuru nemadiki kutenderera pasirese kuti vazvisimudzire ivo pachavo nenzira ine chekuita kuburikidza nekusimba kwedu mumafekitori e-silicone zvigadzirwa uye wholesale silicone products suppliers. Proud to be the leading silicone teether manufacturer, baby toys wholesale suppliers.
Isu tinoshandisa zvemhando yepamusoro chikafu chegiredhi silicone zvinhu kugadzira yedu silicone baby products wholesale ( silicone teether wholesale,silicone beads wholesale,yekudyisa vana seti wholesale, silicone ndiro wholesale,silicone plate wholesale,silicone bib wholesale,silicone cup wholesale , and wholesale baby toys ) .
Makore eruzivo rwekugadzira anotibvumira kubata zviri nyore iyo yese kugadzirwa kwekugadzira cheni, inova mukana wedu wakasarudzika semugadziri akanakisa wesilicone mwana dinnerware uye silicone tochi yematoyi, uye vimbiso yakasimba yekuti isu tipe rese rese rekugadzira masevhisi ezvigadzirwa zvesilicone.
Isu tinonyanya kugadzira zvitoro uye tsika . Kugadzira zvigadzirwa muhuwandu zvakare kunoderedza mutengo weyuniti uye mutengo wekutumira wechigadzirwa. Isu tinogashirawo madiki mabhechi maodha neimwe MOQ kubatsira vatengi kuyedza zvigadzirwa zvedu uye kugamuchira musika mhinduro nekukurumidza. Bata nesu nhasi, taura nesu online kana kufonera +86 13480570288 kuti utange chirongwa chako.
Melikey ndeye silicone chigadzirwa mutengesi ane fekitori kugadzirisa sevhisi. Isu tinotsigira zvinhu zvakagadziriswa senge tsika LOGO, kurongedza, ruvara, nezvimwe. Chinhu chega chega chine chigadzirwa chakasiyana MOQ. Kubva pakugadzirwa kwechigadzirwa kusvika pakugadzirisa, Melikey inopa yakanakisa kukosha-yakawedzerwa masevhisi ezvigadzirwa zvako. Isu tinotsigira kugadzirisa kune zvese zvigadzirwa, Kugamuchirwa kuOEM & ODM maodha!
Isu tinonamatira kukosha kukuru pakugadzira zvigadzirwa zvedu uye tine patents. Tisingasanganisire nyaya dzekutyora mutemo, takazvipira kuburitsa zvigadzirwa zvepakutanga uye kuita kuti zvigadzirwa zvedu zviwanikwe pasi rese.
Hezvino zvimwe nezve akanakisa silicone zvigadzirwa zvehorese mutengesi !
Silicone Uye Huni Teether Mhete Tsika OEM l Mel ...
Mucheche Silicone Plate Set Kudyisa Tsika l Melikey
Silicone Teething Matoyi BPA Mahara Wholesale l ...
China Inotungamira Silicone Zvigadzirwa Mugadziri & Silicone Zvigadzirwa Wholesale Mutengesi
As a top Semugadziri wezvigadzirwa zvesilicone uye wholesale silicone products supplier, tine makore anopfuura gumi nemaviri ruzivo mukugadzira zvigadzirwa zvesilicone, zvigadzirwa zvikuru zvinosanganisira wholesale silicone teether,wholesale silicone chew beads,wholesale baby tableware, wholesale baby feeding seti nezvimwe zvigadzirwa zvesilicone. Makore echiitiko akaita kuti bhizinesi redu rekutengesa rekutengesa rezvigadzirwa zvesilicone zvive zvakanyanya. Panguva imwecheteyo, isu tine nyanzvi yeR&D Chikwata, uye isu tichava neanozvigadzira ega silicone zvigadzirwa mwedzi wega wega. Isu tinogona kukupa iwe mazano ekuvandudza uye kupedzisa kwakanaka kwechigadzirwa chako magadzirirwo.
Sesilicone zvigadzirwa fekitori uye silicone zvigadzirwa zvehorese mutengesi, tinogamuchira OEM uye ODM tsika sevhisi, tumira dhizaini yako kwatiri, tinogona kugadzira sampuli chaiyo mukati memazuva manomwe, isa logo yako pane matoyi ,akazara , mabheji emwana akawanda, mabheji esilicone uye tafura yemwana. , etc. Yedu inoshamisa silicone zvigadzirwa fekitori inonyanya mukugadzirwa kwakawanda kwezvigadzirwa zvesilicone. Chero silicone zvinhu chigadzirwa harisi dambudziko kwatiri. Kunyangwe iwe uri mutengesi kana mhando, yedu yakanakisa silicone zvigadzirwa fekitori ichakubatsira iwe kukura bhizinesi rako nekukurumidza nezvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye sevhisi yakakwana.
Kana iwe uchida kutanga kugadzirisa zvigadzirwa zvesilicone, ndapota inzwa wakasununguka Taura nesu! Providing excellent customer service is the eternal pursuit of Melikey Silicone as the best supplier of silicone products!
Tsigira OEM & ODM
Tine nyanzvi yeR & D timu. Tsigira Kugadziridza, kusanganisira dhizaini yechigadzirwa, logo, pasuru, mavara..... Tinogona kugamuchira OEM uye OD M.
silicone zvigadzirwa zvako, zvakakura-zvakagadzirwa, zvine nguva pfupi yekutungamira. Izvo zvese zvinobva pachokwadi chekuti isu tiri akanakisa mutengesi wezvigadzirwa zvesilicone.
Zvishandiso zvinopihwa nevatengesi venguva dzose. 100% QC mbishi zvinhu. Zvese zvigadzirwa zvesilicone zvakaedzwa zvakasiyana uye kugadzirwa kwakawanda kuti ive nechokwadi chemhando yepamusoro, uye chigadzirwa chega chega chinofanirwa kuongororwa zvakasimba chisati chagadzirira kutumirwa.
Kupfuura 12 Makore Ehunyanzvi
Professonal pasilicone indasitiri pamusoro pemakore gumi nemaviri. Melikey Silicone inopa mazano matsva anovandudza mashandiro emumwe wedu uye kushanda zvakanaka munzvimbo yebasa.
teething nechishongo mwana musikana, teether yakanakisisa 4 wemwedzi , rwokuzvarwa teething, silicone mwana teether , silicone teether , silicone teething marozari ,